Madaxweynaha Puntland oo Xafiiskiisa ku qaabilay wafti ka socdey hay’adda ICRC – Puntland Voice
Madaxweynaha Puntland oo Xafiiskiisa ku qaabilay wafti ka socdey hay’adda ICRC
March 7, 2018 12:35 pm Views: 9
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xafiiskiiska Madaxtooyada Puntland ee Garowe ku qaabilay wafti ka socdey hay’adda ICRC oo uu hoggaaminayey Madaxa ICRC Soomaaliya Simon Brooks.
Wafdiga hay’adda ICRC oo uu hoggaaminayey Madaxa ICRC Soomaaliya Simon Brooks waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsan hay’adda ICRC oo ay ka mid ahaayeen isu duwaha hay’adda ICRC Soomaaliya Peter Lick Iyo Madaxa hay’adda ICRC xafiiskeeda Garowe Abdifatah Fandhaal.
Kulanka Madaxweynaha iyo hay’adda ICRC oo ka dhacay xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa looga hadley halka ay marayaan mucaawinooyinka banii’ aadaminimo iyo hawl gallada kale ee ay Hay’adda ICRC ka fuliso deegaanada Puntland sida Caafimaadka, biyaha iyo kaalmada qoyska.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku boorriyey in ay dar-dar geliyaan hawlaha shaqo ee ay hay’addu ka waddo Puntland isla markaana ay xoogga saaran hirgelinta ceelasha biyaha iyo dib u dayactirka ceelasha hawl-gabka noqday sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in fiira gaara la siiyo lagana war qabo dadka shacabka ah ee dagan buuraha Gal-Gala oo ay saameeyeen dagaalada kooxha arga gixisada ah ee Al-Shabaab.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxa hay’adda ICRC Soomaaliya ayaa isku afgartay dhammaan arimiihii ay ka wada hadleen, iyadoo uu ballan-qaaday Madaxa Hay’adda ICRC in ay dar-dar gelin doonaan guud ahaan mashaariicda ay ka wadaan Puntland isla markaana dhowaan hirgelin doonaan barnaamijyo kale oo la xiriira kor uqaadista tayada caafimaadka, ceelal biyoodyo iyo biyo xireenada laga hirgelin doono dhulka miyiga ah ee Puntland